သရဏဂုံ ဆောက်တည်ရာဝယ်…. - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
Posted by ukkmaung on March 26, 2011 at 1:07pm
သရဏဂုံတရားတော်များ နာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီပို့စ်လေးကို ရေးဖြစ်လိုက်ပါတယ်…… သရဏ ဆိုသည်မှာ
ဘေးအန္တရာယ်ကို တားဆီး ကာကွယ်ပေးတတ်သော၊ ပယ်ဖျောက်ပေးတတ်သော အရာ/ပုဂ္ဂိုလ် ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပေသည်။
1. ၀ဋ်ဘေး (ကိလေသာဝဋ်၊ ကမ္မ၀ဋ်၊ ၀ိပါက၀ဋ်)
4. ဒုဂ္ဂတိဘုံဆင်းရဲမှု တို့ကို ဆိုလိုသည်။
ထို(၄)မျိုးသော ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတို့ကို ပယ်ဖျောက်ပေးတတ်သော၊ တားဆီးကာကွယ်ပေးတတ်သော အရာ/ပုဂ္ဂိုလ် သည် သရဏ ဖြစ်ပေ၏။ တနည်းအားဖြင့် ကိလေသာ စိတ်အပူတို့ကို သက်သာ လျော့ပါးသွားစေမှသာလျင် သရဏ ဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် သရဏ ဆိုသည်မှာ ကိုးကွယ်ရာပင်ဖြစ်၏။ ထိုသို့ (၄)မျိုးသော ပင်ပန်းဆင်းရဲမှု စိတ်ပူလောင်မှု တို့ကို မသက်သာစေနိုင်သော၊ ကာကွယ်တားဆီးခြင်းငှာ မစွမ်းနိုင်သော အရာတို့သည် သရဏ မမည်ပေ။ သရဏ မဖြစ်လျင် ကိုးကွယ်ရန်မထိုက်၊ ကြည်ညိုရန်မထိုက်ပေ။ ကိုးကွယ်ရာ မဖြစ်ပေ။
ဗုဒ္ဓ သည် သရဏ ဖြစ်၏။ ဓမ္မ သည်လည်း သရဏ ဖြစ်၏။ သံဃာ သည်လည်း သရဏ ဖြစ်၏။
ဗုဒ္ဓ သည် ဘေးဒုက္ခများကို တားမြစ်ပေးတတ်၏။ အကျိုးစီးပွားမဲ့ကို တားဆီးပေးတတ်သည်။ ကောင်းရာကို လမ်းညွှန်ပေး၏။ အကျိုးစီးပွားကောင်းကိုလည်း ဖြစ်စေတတ်သည်။ ဘေးဒုက္ခများမဖြစ်စေရန် မကောင်းမှုတို့ကို မပြုလုပ်ရန်၊ မပြောဆိုရန်၊ မကြံစည်ဖို့ရန် ဆုံးမ ပေးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကောင်းကျိုးချမ်းသာများရစေရန် ကောင်းမှုတို့ကို ပြုလုပ် ပြောဆို ကြံစည်ကြဖို့ရန်လည်းကောင်း လမ်းညွှန်ပေးလေသည်။
ထိုကြောင့် သရဏ ဖြစ်ပေ၏။
ဓမ္မ ဆိုသည်မှာ မဂ်လေးတန်၊ ဖိုလ်လေးတန်၊ နိဗ္ဗာန် ဟူသော လောကုတ္တရာကိုးပါး နှင့် သုတ္တန်၊ ၀ိနည်း၊ အဘိဓမ္မာ ဟူသော ပဋိကတ် သုံးပုံတို့ ပင်ဖြစ်ပေ၏။
ထိုဓမ္မ သည် ဘ၀ကန္တာရခရီးခဲမှ လွန်မြောက်စေသည်၊ ထုတ်ဆောင်ပေးတတ်သည်။ ဘ၀အခက်အခဲများကို လွန်မြောက်စေတတ်သည်။ ကိုယ်ဆင်းရဲမှု စိတ်ဆင်းရဲမှုတို့ကို သက်သာစေသည်။ ထို့ကြောင့် သရဏ ဖြစ်ပေ၏။
သံဃာအား နည်းနည်းလေး လှူရုံမျှဖြင့် ကြီးကျယ် များပြားသော အကျိုးထူးများကို ရစေတတ်သည်။ မြတ်သော အလှူကို ထိုက်တန်တော်မူခြင်းသည် အရိယာသံဃာ၏ ဂုဏ်ရည် ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် သံဃာသည်လည်း သရဏ မည်ပေ၏။ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ တွင် သံဃာသည် အရိယာသံဃာကို ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် “သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ” (သံဃာကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ် ပါ၏) ဟု ဆိုရာ၌ သမုတိသံဃာ (ပုထုဇဉ် ရဟန်း သံဃာ) များမှ တဆင့် အရိယာသံဃာတို့၏ ဂုဏ်ရည်တို့ ကို သတိရ အမှတ်ရလျက် ရည်မှန်းလျက် ရွတ်ဆိုရပေမည်။
ဥပမာ..စေတီတော်၊ ဆင်းတုတော်များကို ရှိခိုးတိုင်း ထိုဆင်းတုတော်မှတဆင့် ဘုရားရှင်၏ ဂုဏ်တော်များကို ထွင်းဖောက် အာရုံပြုရပါသည်။ ထို့အတူပါပဲ ပုထုဇဉ် ရဟန်း သံဃာတို့ကို ဆင်းတုတော်များကဲ့သို့ သဘောထားလျက် အရိယာ ဖြစ်ပြီးသော ရဟန်းသံဃာများ၏ ဂုဏ်ရည်ထိအောင် ရည်မှန်းလျက် ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်နိုင်ပါမှ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ စစ်စစ်ကို ရပေမည်။ သံဃာကို သင်ပေးနေတဲ့ ဆရာပဲလို့ ဆရာ အဆင့်လောက် သတ်မှတ်ရုံမျှဖြင့် သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ မဖြစ်သေးပေ။ သရဏဂုံ စစ်စစ် ရအောင် အရိယာ သံဃာထိအောင် ရည်မှန်း ပူဇော် ကိုးကွယ်ရပေမည်။ သရဏဂုံ = သရဏ + ဂမန
သရဏဂုံ ဆိုသည်မှာ သရဏ နှင့် ဂမန ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်၏။ ဂမန ဆိုသည်မှာ အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုသရဏသုံးပါး ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ သံဃာ ၏ အထက်ပါ အရည်အသွေး ဂုဏ်ရည်များကို အာရုံပြုပြီး ကြည်ညိုလေးမြတ်သော ယုံကြည်မှု သဒ္ဓါဖြစ်ဖို့ရန် လိုပေသည်။ ထိုသဒ္ဓါကို အခြေခံလျင် သမ္မာဒိဋ္ဌိ ဖြစ်လေတော့သည်။ ထို မှန်ကန်သော ယုံကြည်မှု သဒ္ဓါ သည်ပင်လျင် ဂမန မည်ပေသည်။ ထိုကြောင့် သရဏဂမန(သရဏဂုံ) သည် ရတနာသုံးပါးအပေါ် ရောက်နေသော ယုံကြည်မှုသဒ္ဓါ နှင့် အသိမှန် (သမ္မာဒိဋ္ဌိ) ဖြစ်၏။ လွယ်လွယ်ဖြင့် တိုတိုဆိုရလျင် ကိုးကွယ်ရာအဖြစ် သိမှတ်ခြင်း ဟုလည်း အဓိပ္ပါယ်ရပေသည်။ ကိုးကွယ်ရာအဖြစ် သိမှတ်ရာ၌ ထိုမှန်ကန်သော ယုံကြည်မှုသဒ္ဓါ သည် ရှေးဦးစွာ အရေးကြီးပေသည်။ ထိုကဲ့သို့သော မှန်ကန်သော သဒ္ဓါဖြစ်ပါမှ သရဏဂုံတည်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ စစ်စစ် ဖြစ်ပေတော့မည်။
သရဏဂုံ အမျိုးအစား (၂) မျိုးရှိလေသည်။
လောကုတ္တရာသရဏဂုံ ဆိုသည်မှာ သစ္စာလေးပါးကို သိမြင်ပြီးသူ၏ သန္တာန်၌ဖြစ်သော ရတနာသုံးပါးအပေါ် ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သောစိတ်ဖြစ်၏။ သစ္စာသိသူ၏ သရဏဂုံ ဖြစ်သည်။ လောကုတ္တရာသရဏဂုံသည် ပျက်စီးခြင်းမရှိ၊ ညစ်ညူးခြင်းလည်း မရှိတော့ပေ။ မဂ်စိတ်နှင့် အတူတူဖြစ်သော ရတနာသုံးပါးအပေါ် ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်စိတ် ဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှသာလျင် လောကုတ္တရာသရဏဂုံကို ရပေမည်။ ပုထုဇဉ်အဖြစ်နှင့် ဘယ်သောအခါမှ မရနိုင်ပေ မဖြစ်နိုင်ပေ။
ပုထုဇဉ်တို့သန္တာန်၌ဖြစ်သော ရတနာသုံးပါးအပေါ် ယုံကြည် အားကိုးမှု စိတ်သည် လောကီသရဏဂုံဖြစ်၏။ လောကီသရဏဂုံနှင့် ကိလေသာတို့ကို ခေတ္တ ခဏမျှ ပယ်နိုင်လေသည်။ တဒင်္ဂပဟာန်ဖြင့် ကိလေသာကို ပယ်ခြင်းဖြစ်၏။
လောကီသရဏဂုံသည် ညစ်ညူးတတ်သည် ပျက်စီးတတ်ပေသည်။
ရတနာသုံးပါးအပေါ် နားမလည်ခြင်း(အ၀ိဇ္ဇာ)၊ ရတနာသုံးပါး၏ ဂုဏ်ရည်တို့ကို ဟုတ်မှ ဟုတ်ပါ့မလားဟု သံသယဖြစ်နေခြင်း (၀ိစိကိစ္ဆာ) တို့သည် လောကီသရဏံဂုံ ညစ်နွမ်းတတ်ပေသည်။ တကယ် နားလည်ပြီး ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်နိုင်ပါမှလည်း သန့်ရှင်း စင်ကြယ်သော လောကီသရဏဂုံ စစ်စစ်ကို ရပေမည်။
လောကီသရဏဂုံသည် ပျက်စီးတတ်ပေသည်။ ပျက်စီးရာ၌လည်း အပြစ်ရှိသော ပျက်စီးခြင်း နှင့် အပြစ်မရှိသော ပျက်စီးခြင်းဟု (၂)မျိုးရှိ၏။ အပြစ်ရှိသော ပျက်စီးခြင်းမှာ…ဘာသာပြောင်း ကိုးကွယ်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် သရဏ မဟုတ်သော အရာများကို လက်ခံချင်သော (တဏှာ) နှင့် ထို သရဏ မဟုတ်သော အရာများကို မှန်တယ်ထင်သော (ဒိဋ္ဌိ) ရှိလျင် အပြစ်ရှိသော ပျက်ခြင်း ဖြစ်လေသည်။
အပြစ်မရှိသော ပျက်စီးခြင်းမှာတော့..သေဆုံးသွားသောအခါ ဖြစ်ပါသည်။ သေသောအခါ စိတ်မရှိတော့သောကြောင့် ဆောက်တည်ထားသော လောကီသရဏဂုံ ပျက်စီးသွားတော့သည်။ အပြစ်မရှိသော ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
ဘာသာခြား ပုဂ္ဂိုလ်တဦးအား မိမိ၏ ဆရာဖြစ်သောကြောင့် လည်းကောင်း၊ ဆွေမျိုး ဖြစ်သောကြောင့် လည်းကောင်း၊ ကြောက်သော အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကျေးဇူးတင်သော အားဖြင့် လည်းကောင်း ကန်တော့ လျင် လောကီသရဏဂုံ မပျက်စီးနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် ယခုခေတ် အထက်လူကြီး ဖြစ်နေလို့ ကြောက်လို့ လက်အုပ်ချီသောအားဖြင့်လည်း ကိုယ်ဆောက်တည်ထားသော သရဏဂုံ မပျက်စီးနိုင်ပါဘူး။
အချုပ်အားဖြင့်တော့ သရဏမဟုတ်တော့အရာတို့ကို သဒ္ဓါဖြင့် ကိုးကွယ်လျင် သရဏဂုံ ညစ်နွမ်း ပျက်စီး ပါတော့သည်။
သရဏဂုံ ဆောက်တည်ရာမှာ..မြန်မာလို အဓိပ္ပါယ်ဖြင့်လည်း ဆောက်တည်နိုင်ပါသည်…
1. တပည့်တော်၏ အသက် နှင့် ခန္ဓာကို ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ သံဃာ တို့အား လှူဒါန်းပါ၏။ (ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပါစေ ရတနာ သုံးပါးတို့အပေါ်၌ ထားရှိသော ယုံကြည်မှု ဆည်းကပ်မှု သဒ္ဓါကို ဘယ်တော့မှ မစွန့်ဘူး ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပေသည်။)
2. မှီခိုစရာ အားကိုးစရာ ဆည်းကပ်စရာ အလုပ်အကျွေးပြုစရာ ရှိပါက..ရတနာသုံးပါးတို့အတွက်ပဲ ပြုမည်။
3. လက်အုပ်ချီ အရိုအသေပြု ရှိခိုးတဲ့အခါမှာလည်း ရတနာသုံးပါးကိုပဲ ရှိခိုး ကန်တော့ မည်။
4. တပည့်အဖြစ် ချဉ်းကပ် သော အခါမှာလည်း ရတနာသုံးပါးထံမှာပဲ တပည့်ခံ ချဉ်းကပ်မည်။ ထိုသို့ ရွတ်ဆိုခြင်းအားဖြင့်လည်း လောကီသရဏဂုံကို ဆောက်တည်ရာရောက်ပါသည်။
အထက်ပါတို့မှာ..သရဏဂုံကို ဆောက်တည်ခြင်းနဲ့ ပက်သက်သော အလေး အနက်ထားရမည့် အချက်များဖြစ်ပါသည်။ သရဏဂုံကို စစ်စစ်ကို ရကြစေခြင်းအကျိုးငှာ ရေးသားလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အောက်ပါတရားတော်များအား နာကြားမှတ်သားပြီး ရေးသားထားပါသည်
ဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံတရားတော်များ - ဒေါက်တာ သီလာနန္ဒာဘိဝံသ
သရဏဂုံ(၃)ပါးတရားတော် - ဒေါက်တာအရှင်ဥာဏိဿရ
သရဏဂုံတရားတော် - အရှင်ကောသလ္လ (ဓမ္မစေတီ)